Umuthi wokukhwehlela wengane encane
Ukushaya ingane yinto ehlale ikhathazeka ngamama. Iningi labo liqala ngokushesha "ukulwa nelanga" - ukuhlolwa okuphuthumayo kwekithi lokuqala yokusiza kwenziwa. Ingabe abazali benza into efanele kulokhu? Kuyadingeka kanjani ukuphatha umkhuhlane futhi kufanele kwenziwe? Umuthi omuhle kakhulu wokukhwehlela wengane encane uthando lomama kanye nohlu lwemikhiqizo yekhwalithi.
Ake siqale sizibuze ukuthi yini ukukhwehlela? Impendulo ilula kakhulu: yi-exhalation eqinile ye-reflex, ehlose ukubuyiselwa ubuciko be-airways. Kungaphazanyiswa yinoma yini: izinto zangaphandle, ukuvuvukala, i-mucus, okukhiqizwa ku-bronchi, okulula kakhulu, i-phlegm, engakwazi ukuqhuma ngenxa yokuthi idonsa kabi ngesihlahla somuthi noma ngenxa yesimo esiqinile kakhulu sezingxenye zayo. Ngamafuphi, ukukhwehlela kunezimbangela eziningi ezahlukene. Kodwa umsebenzi wawo uhlale ufana: ukuzivikela. Ngaphambi kokuba uthole imithi eminingi yokukhwehlela ingane encane, kufanele uqale uvakashele udokotela.
Ezimweni eziningi, ukukhwehlela kubangelwa ukutheleleka kwepheshana eliphezulu noma eliphansi lokuphefumula. Ngakho-ke, i-laryngitis, i-pharyngitis, i-bronchitis, i-tracheitis kanye nokuvuvukala kwesono se-paranasal - konke lokhu kuhambisane nokukhwehlela. Njengomthetho, konke kuqala ngokukhwehlela okuthiwa "okungazalanga", uma kungekho sikhohlela. Kuyinto ebuhlungu kakhulu - eyomile futhi ephazamisayo. Ukuvimbela ingane ukuba ingadlala, ilele futhi idle. Njengomthetho, lesi sigaba sigcina izinsuku eziningana. Khona-ke ukukhwehlela kuyahluka, kuveza. Ukuzikhandla okuphumayo nokude kuyaphela. I-Cough isivele ilula kakhulu, ngoba isikhukhula siqala ukuxosha. Ngezifo ezithathelwanayo, ngokuvamile kuvame kakhulu futhi kukhanya, nge-tinge ephuzi kancane. Uma ukuvuvukala kubangelwa amabhaktheriya, i-sputum imbala kakhulu kakhulu - iphuzi noma iluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngezinye izikhathi kwenzeke ukuthi okokuqala i-sputum elula ithola umbala othile. Lokhu kusikisela ukuthi isitshalo sesibili se-bacteria sijoyine ukutheleleka kwegciwane. Ngendlela, kulesi simo futhi iningi le-SARS liyaqhubeka. I-mucous, ebuthakathaka yi-dominance of viruses, ihlaselwa kalula yi-bacterial. Ngenxa yalokho, ukutheleleka kuhlanganiswe - kokubili amagciwane kanye namagciwane. Ngakho-ke, isikhathi sesifo siba sikhulu. I-malaise ihlala cishe kwezinsuku ezingu-10-12. Khona-ke kufika ukuphenduka kwezinto okuthiwa "izenzakalo ezihleliwe". Njengomthetho, kubuthakathaka, ukunganakwa, hhayi ukudla okunempilo kakhulu futhi, yebo, ukukhwehlela. Esikhundleni salokho, ukukhwehlela ngokuhamba kwesincane se-sputum elula. Yile ndlela izifo ezithinta ukuphefumula ezinzima zenzeka ngayo. Kulokhu, "inkathi yokukhwehlela" ayikho amasonto amathathu.
Ukuvuvukala okungapheli kungenzeka ngenxa yokuthi umndeni uyabhema. Izinkinga eziningi ngamaphaphu abantwana zihlotshaniswa nokubhema okungapheli. Uma abazali bebhema, kufanele bakwenze ngaphandle kwendlu - le mfuneko ayinakuphikwa futhi iyadingeka. Uma kungenjalo, ingane izoba nokunyuka okuqhubekayo kwe-bronchitis. Uphawu lwayo oluyinhloko lukhwehlela. Njengomthetho, unomile, uphikelela futhi kunalokho uhlushwa. Ukuhlaselwa okukhulu kubonakala ekuseni nakusihlwa.
Kunezindlela eziningana zokuvimbela izifo zokuphefumula ezinganeni. Indawo yokuqala lapha "i-home ecology". Indlu ayikwazi ukubhema "udinga ukuhlanza okumanzi, futhi usebenzise amadivaysi akhethekile: ama-purifier air kanye nama-ionizers
Ionizers yisisekelo sokuvimbela izifo zokuphefumula, ikakhulukazi ezinganeni. Udinga ukuwasebenzisa ngendlela efanele. Okokuqala, khetha indawo efanelekayo. Lokhu kubalulekile. Ukusondelana ne-ionizer akunakwenzeka. Ngaphandle kwakhe, konke kuyinto engcolile. Lokhu kungenxa yokuthi i-ion engalungile inciphisa uthuli "oluncibilikisiwe" emoyeni, oluhlala kwi-ionizer ngokwayo nakuzo zonke izindawo ezikude nazo. Kuyingozi ukuhlala kule ndawo: ungavusa ukwanda kwesifo. Ngakho ungafaki ionizer eduze kombhede. Beka kangcono ngaphansi kwetafula lezingane noma efasiteleni. Kuyiqiniso ukuthi kuzodingeka ugeze amaketeni njalo ugeze ingilazi. Imodeli ngayinye inebanga elincane elingavumelekile kusuka kuleso sitsha kuya kumsebenzisi. Inani laso kufanele livele epasipoti yehlanzekile yedivayisi. Uma le namba engekho, ingabe ibalwa ngokuzimela. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuhlukanisa umshini osebenzayo we-electrode ngo-10. Uma i-ionizer ine-voltage ye-10 kV, ibanga elilinganiselwe liyi-1 imitha, uma i-0.5 kV, bese kuyi-50 cm. Uma konke kwenziwa kahle, kungenzeka ukuthi izifo zokuphefumula ezinzima kanye nokukhukhumeza kwezifo zokuphefumula ezingapheli kunciphisa ngo-25-30%.
Kukhona nezifo ezingapheli zokuphefumula. Kulokhu, ukukhwehlela kuthatha amasonto amathathu noma ngaphezulu. Angakwazi ukuhlukumeza ingane ngisho nezinyanga ezimbalwa. Ngokuvamile lokhu iphethini kubonakala ku-bronchitis engapheli. Kuze kube yamuva, ukuxilongwa okunjalo kwenziwa kuphela ngabantu abadala, njengomthetho, ababhemayo abanolwazi olude. Kodwa eminyakeni embalwa eyedlule, i-bronchitis engapheli yangena ohlwini olusemthethweni lwezifo zobuntwana. Kwakukhona ngezizathu eziningana. Ekuqaleni kukhona isimo esibi semvelo. Yingakho odokotela baqala ukubuza ukuthi izingane ezigulayo ziphi. Ngokuvamile izindlu zabo zihlala phansi. Lokhu kuyingozi enkulu, ngoba zonke izinto eziyingozi, ikakhulukazi, i-nitric oxide, iqoqa phansi. Inomphumela omubi kakhulu esimweni se-bronchi, futhi kukhona ukuvuvukala okungapheli.
Izinqubo zomshuwalense ziphikisana-kuboniswa lapho izinga lokushisa liphakanyiswa
Muva nje, bonke bathanda amabhati kanye nama-saunas. Asetshenziselwa ukuvimbela kuphela, kepha futhi nokuphathwa kokwelashwa kakade kakade. Abanye abazali bakhetha ukweba ingane yabo kahle. Lokhu kuvunyelwe uma ingane iseneminyaka engaphezu kwengu-10, akanalo lokushisa futhi isikhathi esichithwa ekamelweni lomusi akuyona imizuzwana engaphezu kuka 60-70. Kodwa kudingeka uqaphele ngokucophelela ukuthi ingane ayikhulumi ku-sauna futhi iphefumule kuphela ngekhala. Kudingekile kuphela ukufaka umoya oshisayo we-sauna emlonyeni - futhi i-bronchi iba yingozi kunoma yikuphi ukutheleleka.
Ku-mucosa ye-bronchial kune-cilia encane, evikela ukungafihli, uthuli namagciwane. Ziqukethe iphrotheni egoqa ngokushisa okuphezulu. I-Cilia ifa, i-bronchi iba "yimibala" futhi ayisakwazi ukuzivikela
Umusi kusuka ku-ARI
Umzila wesibili wokuzivikela ngokumelene "nokutheleleka kokukhwehlela" yizikhambi zabantu. Uma ingane ijwayele izifo zokuphefumula, ngesikhathi esibandayo kungenzeka ukuba usebenzise, ​​isibonelo, ukuhlanza amaqabunga eucalypt. Isenzo sabo se-bactericidal sikhulu kakhulu kathathu kunaleyo ye-penicillin, ngakho-ke le ndlela yokwelapha ibonakala ngokusebenza okungavamile. I-gargle kufanele ihlanzwa izikhathi eziningana ngosuku kulo lonke i-ARI.
Umphumela omuhle kakhulu unikeza futhi u-decoction wama-herbs celandine. Badinga ukugqoka izikhathi ezingu-2-3 ngosuku ngesonto. I-Propolis ine-disinfecting ne-immunostimulating effect. Omunye isipuni samanzi tincture kufanele ahlakazeke engilazini yamanzi afudumele futhi anikeze ingane ingubo enjalo.
Ungenza izinhlelo zokusebenza: ebusuku ubambelele ucezu lwe-propolis ezingxenyeni zomsana womntwana. Kodwa ungakwenza lokhu kuphela kwalabo bantwana abangakaze baluthole ukungezwani komzimba kumikhiqizo yobusi nezinyosi.
Okubaluleke kakhulu ukudla. Ngokuthambekela kwezifo zokuphefumula, ama-orange kanye namapomegranate amajusi ayasiza kakhulu. Lezi zinsuku kumele zihlanjululwe futhi ziphuze kalula ngotshani, ukuze i-asidi ingalimazi uqweqwe lwawo lwamazinyo. Kuhle ukudla njalo izidakamizwa ze-cranberry ne-cowberry, futhi, ngokungazelelwe, odokotela batusa i-cocoa nobisi noshukela. Lokhu kuphuza futhi kunciphisa amathuba okutheleleka kokuphefumula.
Ukususa umphimbo wakho
Njengoba ama-expectorants asebenzisa ama-decoctions wezokwelapha zokwelashwa: umama nomama wesifazane, i-ledum, i-elecampane, i-juice yomsila omnyama uju, i-plantain juice, i-anise izithelo ezikhishwe kanye ne-thyme. Futhi amakhambi we-thermopsis, marshmallow, licorice, amafutha abalulekile. Amalungiselelo aqinisekisiwe avela emaqabunga e-ivy - i-awning ne-gedelix. Enye ye-mucolytics engcono kakhulu i-ambroxol.
Ukukhwehlela kuyinkinga yokuzivikela. Ukuyisebenzisa, i-sputum, amabhaktheriya, amakhemikhali adonswa kusuka ku-bronchi. Uma konke lokhu kuhlala ngaphakathi, khona-ke ukugula kubambezeleka isikhathi esiphezulu. Ngenxa yalesi sizathu, odokotela abafuni ukunikeza umuthi wokukhwehlela wengane encane. Bazuza kuphela esimweni esisodwa - lapho ingane ihlushwa ukukhwehlela okomile, okuvimbela ingane ukuba ingalali, idlala.
Ukukhwehlela okuhlala njalo kubangelwa ukucasuka ngokweqile kwe-bronchi. Kuvela umbuthano ononya, ongawaphulwa ngosizo lwezidakamizwa ezikhethekile eziphikisayo. Bangakhetha kuphela udokotela
Uma ukhuluma nge-prophylaxis yokwelashwa "yezifo zokukhwehlela", khona-ke endaweni yokuqala kukhona okuthiwa "yendawo" yokugoma. Lezi izidakamizwa eziqukethe izingxenye zamabhaktheriya ezibangela izifo zokuphefumula. Zivuselela ukukhiqizwa kwama-antibodies, futhi ingane ivikeleke ekutheleleni okuningi. Imishanguzo yendawo ihlanganisa ribomunil, bronhomunal, imudon.
I-Ribomunyl isiza ukuthuthukisa ukuzivikela komzimba ngokumelene nezifo ezivame kakhulu zezifo ze-pulmonary. Uqokwa uma ingane ivame ukugula ngezifo zokuphefumula. Isidakamizwa sithathwa yi-course: izinsuku ezine zokuqala zesonto ngalinye amasonto amathathu. Bese-izinsuku zokuqala ezine zenyanga ngayinye izinyanga ezingu-5. Ukwelashwa kuthatha izinyanga eziyisithupha. I-Imudon inqunyelwe izingane ezineminyaka engaphezu kwengu-3. Isidakamizwa siyithebhulethi ephathekayo enambitha ilamula. Anganikezwa ngeso lengqondo le-candy. Izingane ezineminyaka engu-3 kuya kwengu-14 zinikezwa amaphilisi ayisithupha ngosuku, kufanele zithathwe ngezikhathi zamahora amabili. Ngonyaka kuyinto efiselekayo ukuthola izifundo 3-4 zokwelapha. Lokhu kungukuvimbela i-bronchitis, i-SARS, ubuhlungu bomphimbo, i-laryngitis.
Ukukhwehlela okuhle kakhulu kwe-syrups
Lapho umntwana "eshaya" ukukhwehlela futhi ungazi ukuthi yini ongayenza ukuze usize, inhliziyo yakho iphuma egazini. Noma kunjalo, ngaphambi kokuba unikeze imvuthu isiraphu yokukhwehlela, thintana nodokotela futhi uhlale ukhumbule ukuthi ngaphambi kokuba ulale, kudingeka unike isiraphu okungenani imizuzu engu-30-40 ngaphambi kokuthi ingane ilele. Uma kungenjalo, kungavusa ukukhwehlela.
Isiraphu ye-Orange, okunconywa hhayi kuphela ukukhwehlela okubandayo, kodwa ngenxa yokugula, nge-asthma ye-bronchial. Kusetshenziswa i-laryngitis ne-bronchitis.
Ikhiqizwa ngendlela yesiraphu futhi ihlaselwa ekukhwehleleni. Isetshenziselwa isifo sephethini eliphezulu lokuphefumula. Iqukethe ukukhishwa okumnyama kwamaqabunga omkhonto, i-glycerin.
ukuphathwa ngomlomo. Inganikezwa izingane ezinetiyi, neziphuzo zezithelo ezithintekayo nasezintweni zokudoba. Iqukethe i-anise namafutha we-eucalyptus.
Ukulungiswa kwesitshalo semvelo, iqukethe amaqabunga ama-ivy. Itholakala ngesimo sesiraphu nasemaceleni. Ithuthukisa ukuphefumula. Ikhambi lase-homeopathic lokukhwehlela. Kuyasiza nge-bronchitis ende, lapho ukukhwehlela kuthatha ngaphezu kwenyanga.
Ukuphumula ukuphumula kwezingane
Ukuhlanzeka yisiqinisekiso sempilo yengane
Umbono odokotela: ingabe i-strabismus ingayidlulisa ingane eyedwa?
Amathambo wamazinyo: ukwelashwa kwamazinyo wamazinyo
Isikhumba samakhemikhali sishisa enganeni
Ukunakekelwa kwezinwele ezinganeni
Ilayisi nokudla kwemifino
Ukuziphatha kwabesifazane ezinsukwini ezibucayi
Ingabe kuyingozi ukusebenzisa isisekelo?
I-Aqua aerobics yabesifazane abakhulelwe: ukuphikisana
Kungani umfana engafuni ukushada?
Isaladi ngama-mushroom okuthosiwe
Ziyini ama-estrogens, futhi ziphi ukudla okuqukethe?
Amantongomane e-Pistachio, Izindawo eziwusizo
Ukudla inyama ngaphansi kwe-puff pastry
I-Risotto bianco ne-pesto sauce
Indlela yokunakekela isikhumba sentamo emva kwe-50
Indlela yokubopha i-kerchief enhle